လင်္ကာ: လူပြိန်းဆိုတာ ဗိုလ်ကျရတာကိုကြိုက်တယ်
ငယ်ငယ်တုန်းကအဖြစ်လေးတခုသွားသတိရတယ်။ကျနော်တို့ရပ်ကွက်ထဲကကိုဖိုးလုံးဆိုတာတော်တော်နံမည် ကြီးတယ်။ အကောင်းကြီးတာတော့မဟုတ်ဘူး ဆိုးတာ မိုက်ရိုင်း ရမ်းကားတာ ၊ လူသတ်မူ့ဖြစ်ပြီး ထောင် က ပြန် လွတ် လာတော့ မိုက်ရိုင်းရမ်းကားတာ ပိုဆိုးလာတယ်။ သူနဲ့တော်ယုံလူတွေက မယှဉ်ကြ ဘူး ရှောင် ကြတယ်၊ သူအရက်ဘိုးတောင်းရင်လည်း တချို့သူတွေကကြောက်ကြတော့ ပေးကြတယ်၊ ဒါကို သူကို သဘောကျ ဂုဏ်ယူနေတာ၊ လူတွေက သူ့ကိုကြောက်နေတာကို သူက ပီတိဖြစ်နေတာ။ သူ့ဘ၀မှာ တခြား ဂုဏ်ယူစရာဆိုတာလည်းမရှိလေတော့ လူတွေကို ကြောက်အောင်လုပ် အနိုင်ကျင့် ဗိုလ်ကျပြီးမှ သူ့ဘ၀ကိုရပ်တည်နေရတာ…ထောင်ဆိုတာသူ့ဘ၀အတွက်အိမ်ဦးနဲ့ကြမ်းပြင်……….လူတယောက်ကိုရိုက်လိုက်နှက်ရိုက်ရမှာကိုလည်း နည်းနည်းလေးမှ ကိုယ်ချင်းမစာတတ်သူ…..
၈၈ လူထုအရေးတော်ပုံကြီးဖြစ်တော့…သူ့ကို လူအုပ်ကြီးက…မဆလ အစိုးရသူလျှိုဆိုဝိုင်းဖမ်းပြီး သတ်မယ်လုပ်တယ်….အဲဒီတုန်းက မြင်ကွင်းကို အခုထိမြင်ယောင်နေတုန်းပဲ….ရိုက်နှက်ထားလိုက်တာ …တကိုယ်လုံးရစရာမရှိဘူး…ကျနော်တို့ကျောင်းသားတွေသိတော့…သူ့ကိုမသတ်ဘို့..ကျနော်တို့မေတ္တာရပ်ခံ တယ်…နောက်…ဆေးရုံကိုပို့လိုက်တယ်…..ဆေးရုံရောက်တော့…မျက်နှာဆိုတာဇီးရွက်လောက်လေးပဲရှိတယ်….သူ့ကိုကယ်ဘို့တစာစာတောင်းဆိုနေတာပဲ…..ကျနော်တို့ဝိုင်းဝန်းကူညီပါတယ်….အသက်ပြင်းတယ်လို့ပြောရမလားမသိဘူး…မသေဘူး….ဒီလိုနဲ့နှစ်တွေဝေးသွားလိုက်တာတနေ့ရိပ်သာတခုကိုရောက်သွားရင်းနဲ့က…သူနဲ့ပြန်ဆုံခွင့်ရလိုက်တယ်….အဲဒီအချိန်မှာ…သူဟာရဟန်းဝါ၁၀၀ါလောက်ရနေတဲ့သံဃာတစ်ပါးဖြစ်နေပြီ…..အတိတ်တခါကလူဆိုးလူမိုက်ကိုဖိုးလုံးဘ၀နဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်မှတကယ့်ကိုမယုံနိုင်လာက်အောင်ပြောင်းလည်းသွားပြီ……ကျနော်တို့ ကျောင်းသားတွေကို ကျေးဇူးတင်ကြောင်း ထပ်ခါထပ်ခါပြောတယ်…..
“ဦးဇင်းက….နှစ်ဘ၀ပြောင်းသွားပြီဒကာကြီး….ဟိုးတချိန်ကကိုယ့်လုပ်ရပ်တွေကိုပြန်စဉ်းစားမိတိုင်း…နောင် တရမိတယ်…တကယ်တော့..ဦးဇင်းခံခဲ့ရတာဟာ..ကိုယ်ပြုသမျှကံ..ကိုယ်ပြန်ခံရတာပါ..ဒါ့အတွက်ဦးဇင်းဖြေ သာပါတယ်….ဒါပေမဲ့…ကံကောင်းတယ်ပဲပြောရမလား…ဒကာတို့ကျောင်းသားတွေကောင်းမူ့ကြောင့်..ဦးဇင်း အသက်ရှင်သန်ခွင့်ရပြီး…ဘ၀ပြောင်းသွားတာ……ပြန်ပြောရရင်လေ…သိပ်ရှက်ဘို့ကောင်းတာပဲ….ဦးဇင်းလူ ၀တ်ကြောင်ဘ၀တုန်းက…ပညာဆိုတာလည်းမသင်ခဲ့ရ..ဓနဥစ္စာကလည်းမရှိ…ကိုယ့်ကိုသွန်သင်ပြသပေးမဲ့ သူကလည်းမရှိ ဆိုတော့…ဆိုးချင်သလောက်ဆိုး မိုက်ချင်သလောက်မိုက် ပဲ…ဒကာကြီးတို့သိပါ တယ်….ဦးဇင်းက အဲဒီတုန်းက ..အဲသလို လူတွေကို အနိုင်ကျင့်ရတာကို သိပ်ပျော်တာ…..လူတယောက်ကို ထိုးလိုက်ကြိတ်လိုက်ပြီးပြီဆိုသိပ်ပီတိဖြစ်တာ….အော်..တကယ်ကကိုယ်မခံရသေးလို့ဒီလိုလုပ်နိုင်တာပါ…. ဦးဇင်းစဉ်းစားမိတယ်…လူပြိန်းဆို တာ…ဗိုလ်ကျရတာကို သိပ်ကြိုက်တာ ဒကာကြီးရ……….”
ဒီစကားလေးကကျနော့်ရင်ကိုတော်တော်လှုတ်ခတ်သွားတယ်…..လူပြိန်းဆိုတာ…ဗိုလ်ကျရတာကိုကြိုက်တယ် တဲ့…………ကျနော့်စိတ်ထဲမှာ စဉ်းစားစရာဖြစ်သွားတယ်….
“ဦးဇင်းခံရတဲ့အလှည့်ကျ…မခံစားနိုင်တော့ဘူး…အရမ်းကြောက်တယ်..သေရမှာကိုအရမ်းကြောက်တယ်…. တုန်လူတ်တယ်……သူများကိုအနိုင်ကျင့်တယ်ဆိုတာ….ကိုယ့်ခံရတာ..ကိုယ့်အသားနာတာမှမဟုတ်တာ… လုပ်ရဲတာပေါ့…ဒုတ်နဲ့လည်းရိုက်ရဲတယ်…ဓါးနဲ့လည်း..ခုတ်ရဲတယ်….ကိုယ့်အသားကို..၀ါးခြမ်းပြားလေးလောက် နဲ့အရိုက်ခံရတာမျိုးကြတော့ .တော်တော်မခံနိုင်တာပဲ ဒကာရေ…ကိုယ်ချင်းစာတရား မဲ့တယ်ဆို တာ ..ဒါပေါ့ …..နောက် ဦးဇင်းစဉ်းစားကြည့်မိတယ်…..လူတွေဟာ…လူလူချင်းဗိုလ်ကျရတာကိုကြိုက်ပုံရတယ်….အရသာခံတွင်းတွေ့ပုံ လည်းရတယ်ဗျ…..ဦးဇင်းဆရာတော်က ဘာပြောသလည်းဆိုတော့….အစိုးမရတဲ့လောကကြီးကို အစိုးရချင်တာ လူ့သဘာဝပါပဲတဲ့….”
ကျနော့်ရှေ့ကထိုင်ပြောနေသူဟာ..တချိန်ကလူဆိုးကိုဖိုးလုံးဟုတ်မှဟုတ်ပါလေစွလို့တောင်စဉ်းစားမိတယ်…..သူ့ရဲ့လက်တွေ့ဘ၀ကပေးလိုက်တဲ့သင်ခန်းစာတွေ..ဒဏ်ရာဒဏ်ချက်တွေကပေါ်ထွက်လာတဲ့..အမှန်တရားတွေ…..ဟုတ်တယ်…လူ့ရဲ့သဘောသဘာဝဆိုတာအားလုံးအတူတူပါပဲ….ကိုဖိုးလုံးမှမဟုတ်ပါဘူး……..ဗိုလ်ကျရ တာကိုအရသာတွေ့တာ..အနိုင်ယူအနိုင်ကျင့်ရတာကိုခံတွင်းလိုက်တာ….ဒီမကောင်းတဲ့ သဘောသဘာဝကြီးကို အသိဥာဏ်ရှိသူများကစာနာစိတ်တွေ၊ကိုယ်ချင်းစာတရားတွေ၊ဥာဏ်ပညာတွေနဲ့ဆင်ချင်ယူကြရတာကိုး…… .ဒါကို ဒီအတိုင်းလွှတ်ထားလိုက်ရင်….သူက သာယာသွားတော့တာပဲ….ဗိုလ် ကျစိုးမိုးချင် တဲ့စိတ် ဟာ..အ တန်း ပညာ အတတ်ပညာတတ်မြောက်ထားခြင်းတွေမထားခြင်းတွေနဲ့မသက် ဆိုင်ဘူး….ဗိုလ်ကျတယ် ဆိုတဲ့စိတ်ဟာ…မိမိရဲ့သာလွန်ချက်နဲ့ လူတွေကို အနိုင်ကျင့်တာ….အာဏာရှိသူက အာဏာနဲ့၊ငွေရှိသူ ကငွေနဲ့၊ပညာတတ်သူက ပညာနဲ့၊ မိုက်ရိုင်းရဲသူက မိုက်ရိုင်းရဲတဲ့အားနဲ့ လူတွေကို အနိုင်ကျင့်တာဟာ ဗိုလ်ကျတာပဲ၊ ကိုဖိုးလုံးကတော့ သူက မိုက်ရိုင်းရဲတယ်…..ထောင်ထဲတန်းထဲကို မျက်ကန်းတစ္ဆေ မကြောက်တိုးဝင်ရဲတယ်…လူအများစုက သူ့လို လိုက်မလုပ်ရဲတော့ သူကလူတွေကို အနိုင် ကျင့်တယ်…ဗိုလ်ကျတယ်……
နောက်တယောက်က…ကျနော်သရက်ထောင်ထဲမှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဘ၀နဲ့ရှိနေစဉ်အချိန်ကပါ….နံမည် ကမျိုးတင့်….သူ့ကိုငှက်ရိုးလို့ပဲလူသိများကြတယ်…အဲဒီအချိန်ကသရက်ထောင်ထဲမှာရှိခဲ့တဲ့နိုင်ငံရေးအ ကျဉ်း သားအားလုံးသိကြတယ်။သူကကျနော်နေခဲ့တဲ့တိုက်အကျဉ်းဆောင်ရဲ့ရှေ့မှာတောင်ယာလာလုပ်တဲ့သူ… ကျနော်နဲ့ကတဒေသသားထဲလည်းဖြစ်ပြန်…၈၈အရေးတော်ပုံအမူ့လည်းဖြစ်ဆိုတော့တော်တော်ခင်မိတယ်…..သူ့တောင်ယာကထွက်တဲ့သီးနှံတွေဆိုလည်းကျနော်ကိုလာပေး…ကျနော်ကလိုအပ်တဲ့စားစရာလေးတွေထဲ့..သူကစားဖိုမှာသွားချက်….စားကြပေါ့….နိုင်ငံရေးထူးသတင်းထူးလေးတွေကြားလာရပြီဆိုကျနော့်ဆီအမြန်လာပြောတယ်……ဒီလိုနဲ့နေလာရာက………… ထောင်ပိုင်ကြီးဆီမှာသွားသွားနှိပ်ပေးရတဲ့အလုပ်ပေါ်လာတယ်…ဘယ်လိုကနေဘယ်လိုဖြစ်တယ်လည်းမသိ…သိပ်မကြာခင်မှာပဲထောင်ပိုင်ကသူ့ကိုတထောင်လုံးတန်းစီးဆိုခန့်လိုက်တယ်လေ(တထောင်လုံးတန်းစီးဆိုတာ..ထောင်ထဲမှာရှိတဲ့အကျဉ်းသားတွေကိုအကျဉ်းသားအချင်းချင်းပြန်အုပ်ချုပ်ခိုင်းတဲ့နေရာမှာအကြီးဆုံးပေါ့)…အဲဒီအချိန်ကစလို့..ငှက်ရိုးစတိုင်ကပြောင်းသွားတယ်(အရင်ငှက်ရိုးမဟုတ်တော့ဘူး)ကျနော်ကတော့ကိုယ့်လူတ ယောက်တထောင်လုံးတန်းစီးဖြစ်သွားရင်…အကျဉ်းသားတွေအပေါ်သက်သက်ညှာညှာရှိလောက်ပါရဲ့…နိုင်ငံ ရေးအကျဉ်းသားများအခွင့်ရေးလည်းနားလည်တန်ကောင်းလောက်ပါရဲ့ဆိုထင်လိုက်တာ..ဘယ်ဟုတ်လိမ့်မ လည်း…ကိုယ့်လူက…ဇာတိပြလာတော့တာ….သူတန်းစီးဖြစ်လို့မကြာခင်..သာမန်ရာဇ၀တ်အကျဉ်းသားတွေ အပေါ်အနိုင်ကျင့်တော့တာပဲ….သူ့မျက်လုံးနဲ့မတွေ့တဲ့သူဆို…ဒုတ်နဲ့ရိုက်….လူတွေကိုရိုက်နေရတာ…သူက ကစား နေသလိုမျိုဲး….သူလာရင်ကျိုးနွံတဲ့ပုံစံနဲ့နေပေးရတဲ့အကျဉ်းသားတွေကိုကြည့်ပီတိဖြစ်နေတာ……ဒီ လိုနဲ့နေလာ ရင်းကသူကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေအပေါ်တောင်ဗိုလ်ကျလာတယ်၊ကွယ်ရာမှာဆိုရာဇ၀တ် အကျဉ်းသားတွေကိုပြောရင်….မင်းတို့ထက်ပိုတဲ့….ဘယ်သူမှထိန်းလို့မရတဲ့….ငါးည(နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား ကိုဆိုလိုတာ)တွေ တောင်သူကဘယ်လိုနိုင်အောင်ထိန်းတာ…ဘယ်လိုပြားဝပ်နေအောင်လုပ်ထားတာ…စ သဖြင့်မဟုတ်တာတွေ ပြောပြီး…စကားလုံးတွေနဲ့ဗိုလ်ကျတယ်…ကုန်ကုန်ပြောရရင်လမ်းလျှောက်တာတောင် အရင်လိုမဟုတ်တော့ဘူး…သူ့ နောက်က တပည့်တပမ်းတွေနဲ့ မြောက်ကြွမြှောက်ကြွဖြစ် လာတော့ တာပဲ…ကျနော့်ဆီလည်း မလာတော့ဘူး ( မလာတော့ဘူးဆိုတာထက် မတွေ့ချင်လို့ရှောင်နေတယ်ဆိုတာ ပိုမှန်ပါလိမ့်မယ်)၊ တစတစနဲ့ ငှက်ရိုးအခြေနေကပိုဆိုးလာတယ်….တထောင်လုံးမှာရှိတဲ့အားလုံးသော အကျဉ်းသားတွေတောင်မကဘူး…. ထောင်မူးအဆင့်အရာရှိတွေဝန်ထမ်းတွေကပါ..တော်တော်ကိုမျက်မုန်း ကျိုး မုန်းတီးခံရတဲ့အဆင့်ကိုရောက်နေပြီ ဘာလို့လည်းဆိုတော့ ထောင်ပိုင်က ဘယ်ဝန်ထမ်း ဘာလုပ်သလည်း သူ့ဆီကို အကုန်သတင်းပို့ရမယ်ဆိုပြီး သူ့ကိုခိုင်းထားတော့…..မှတ်စုစာအုပ်တအုပ်နဲ့ အကုန်မှတ်တမ်းတင် သတင်းပို့နေတော့တာပဲ…..သူအမြဲ လက်သုံးပြောနေကြစကား က…..“ကျုပ်ကတာ ၀န်နဲ့ပတ်သက်လာရင်…ဘယ်သူ့မှမညှာဘူး…စည်းကမ်းဖောက် ဖျက်သူမှန်သမျှအကုန်အရေးယူ မယ်”တဲ့….သူ့စကားကဘယ်ရောက် လို့ဘယ်ပေါက်မှန်းမ သိဘူး…ဒီစကားသုံးရအောင်…နိုင်ငံတော်က တရားဝင်ခန့်အပ် ထားတဲ့ဝန်ထမ်းလည်းမဟုတ်…သူ့ဘ၀က…သူလိုကိုယ်လိုအကျဉ်းသားဘ၀…..တခါ ..ထောင်ပိုင်ကလည်း စစ်ဗိုလ် ( ဗိုလ်ကြီးဘ၀ ) ကနေ အသွင်ပြောင်းနဲ့ရောက်လာတာမှ မကြာသေး…ဆိုတော့….ဘုန်းကြီးရူးနဲ့ရေဒီယိုပျက်တွေ့ကြတော့တာပဲ…..အကျဉ်းထောင်လက်ဆွဲဥပဒေကို ကျော်ပြီးလုပ်ချင်ရာတွေလုပ်တော့တယ်…..နှစ်ယောက်လုံးကဗိုလ်ကျနေရတာကိုအရသာတွေ့နေကြတာ……အဆုံးမတော့ကောင်လေးတယောက်ကိုယောကျာင်္းချင်းကာမဆက်ဆံဘို့ကြိုးစားရာက…တထောင်လုံးတန်းစီးရာထူးပြုတ်…တိုက်ပိတ်…နောက်ရဲဘက်ပို့ခံရ…ရဲဘက်ရောက်တော့….သူနှိပ်စက်ထားတဲ့သူတွေက…လက်စားချေသတ်ပစ်လိုက်တယ်လို့ကြားတယ်……
ဒီဖြစ်စဉ်ကိုစဉ်းစားကြည့်တယ်…..အဲဒီကာလက..သရက်အကျဉ်းထောင်မှာဆို….နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေ ကလွဲလို့…ရာဇ၀တ်အကျဉ်းသားတွေဆိုတာ…သူ့ကိုကြောက်နေလန့်နေရတာ….ငှက်ရိုးဘာမှမဟုတ်ဘူး…. ဘာအဆင့်မှကိုမရှိတာကျနော်အသိဆုံး….အဲဒီ့ဘာမှအဆင့်မရှိတဲ့သူကိုလန့်နေရတယ်ဆိုတာ……သူ့လက် ထဲလုပ်ပိုင်ခွင့်ရောက်သွားတာကိုး….သူအုပ်ချုပ်နေပါတယ်ဆိုတဲ့ထောင်သားတွေထဲမှာဆရာဝန်တွေ…စစ် ဗိုလ်ပြုတ်တွေ…ပိုက်ဆံချမ်းသာသူတွေအများကြီး…….
လူပြိန်းလက်ထဲ…လုပ်ပိုင်ခွင့်ရသွားပြီဆို….ဗိုလ်ကျတတ်တာဓမ္မတာပါပဲ……သူ့မှာစဉ်းစားတွေးခေါ်နိုင်တဲ့အ ရည်ချင်းမှမရှိတာ….သူ့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်မှန်သမျှဟာ…သူ့အတ္တကိုအခြေခံပြီး…လာတာဆိုတော့…ဘယ်မှန်နိုင် ပါတော့မလည်း………လူပြိန်းဆိုတာ..သူသိတာအခုပဲရှိတယ်…အဲဒါ…သူ့အတ္တ..တနည်းအားဖြင့်သူ့လောဘ… ….ပညာ နည်းမှလူပြိန်းဖြစ်တာမဟုတ်ဘူး…ပညာ တတ်တွေထဲမှာလည်း…လူပြိန်းတွေ အများကြီး…
လူပြိန်းဆိုတာ ဗိုလ်ကျရတာကို ကြိုက်တယ်……………………………………..
ဗိုလ်ကျချင်တဲ့သူဆိုတာ….အခုအမှန်ဟာတော်ကြာမှားရင်မှားမယ်….အခုအမှားဟာခနနေ..မှန်ရင်မှန်မယ်…. .သေချာတာ တခုကတော့….သူတို့ရဲ့ အမှန်တရားဆိုတာ…သူတို့ရဲ့အတ္တပဲ…။
ယခုလက်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံက စစ်အာဏာရှင်များကိုပဲကြည့်ပါ…..သူတို့ တိုင်းပြည်ကို ချုပ်ကိုင်ထားတာ တခုတည်းသောပေါ်လစီပဲရှိပါတယ်…ဒါကတော့…ဗိုလ်ကျစိုးမိုးခြင်းဆိုတဲ့မူကလွဲလို့တိကျခိုင်မာတဲ့သဘော တ ရား လမ်းစဉ် ဥပဒေဆိုတာ မရှိပါဘူး ( လူရိုသေရှင်ရိုသေစာအုပ်စာတမ်းတွေနဲ့ပြုစုထားပေမဲ့ လက်တွေ့ ကတော့ ဒီသဘောတရားလမ်းစဉ်တွေကိုပစ်ပယ်ပြီး လက်တန်းအမိန့်တွေနဲ့ ဗိုလ်ကျစိုးမိုးရေး တခုသာလျှင် ရှိပါတယ်)
ဗိုလ်ကျတတ်တဲ့အကျင့်ဆိုးဆိုတာဘယ်လောကမှာမှမကောင်းဘူး…..ကျနော်တို့တတွေဟာဗိုလ်ကျတတ်သူ တွေ ဟုတ်မဟုတ် ကိုယ့် ကိုယ်ကိုယ်စစ်ဆေးကြည့်ရအောင်ပါ၊